Moderna COVID-19 jekiseni rakamiswa muJapan mushure mekufa kwevaviri
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Japan Kuputsa Nhau » Moderna COVID-19 jekiseni rakamiswa muJapan mushure mekufa kwevaviri
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Japan Kuputsa Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Bazi rezvehutano reJapan rakasimbisa kuti vanhu vaviri vakabaiwa majekiseni vachishandisa mishonga kubva mubatch vakafa.
Zvekunze zvinhu zvakawanikwa mune akati wandei majekiseni emishonga.
Hurumende yeJapan yakawana kusvibiswa mukupera kwesvondo.
Kusvibiswa kunogona kunge kuri nekuda kwekukanganisa kwekugadzira pane imwe yemitsetse yekugadzira, anodaro Moderna.
Hurumende yeJapan yakamisa kushandiswa kwechirwere cheModerna COVID-19, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri vakafa mushure mekugamuchira pfuti kubva kune izvo zvinonzi nevakuru veJapan 'zvakasvibiswa' mabatch.
Mamirioni emadhosi eModerna COVID-19 akamiswa mushure mekunge zvinhu zvekunze zvawanikwa mune akati wandei emabatch.
Vakuru vehutano veJapan vakawana kusvibiswa mukupera kwesvondo mune batch ye Dzazvino Mushonga weCOVID-19 mudunhu reGunma, padyo neTokyo, uchimanikidza vakuru kuti vambomira kubaya.
Sarudzo yekumisa huwandu hwese hwemamirioni 2.6 eiyo Moderna jekiseni inouya mushure mamirioni 1.63 pfuti dzakamiswa svondo rapfuura zvichitevera kuwanikwa kwezvinosvibisa mune zvimwe zvirongo mubatch iro rakatumirwa kunzvimbo dzinopfuura mazana matanhatu nemakumi matanhatu dzekudzivirira nyika.
Kunyange hazvo kusvibiswa kwacho kusati kwasimbiswa, Moderna nekambani yemishonga Rovi, inogadzira majekiseni emishonga eModerna, yakati inogona kunge iri nekuda kwekukanganisa kwekugadzira pane imwe yemitsetse yekugadzira, kwete chero chimwe chinhu chine chekuita nacho.
JapaniBazi rezvehutano rakasimbisa kuti vanhu vaviri vakabaiwa majekiseni vachishandisa mishonga kubva mubatch vakafa. Nekudaro, iyo chikonzero cherufu mune ese ari maviri kesi iri pasi pekuferefetwa uye vakuru vakuru vanoti hapana chekuchengetedzeka kunetsekana kwakazivikanwa parizvino. Mune chirevo, Moderna uye muparidzi wekuJapan Takeda akataura kuti "hatina humbowo hwekuti kufa uku kunokonzerwa nemushonga weModerna COVID-19."
Gunma parizvino inzvimbo yechinomwe yeJapan yekuwana zvinosvibisa mumadhivha ekudzivirira kweModerna, mushure mezviitiko zvakafanana muAichi, Gifu, Ibaraki, Okinawa, Saitama neTokyo. Izvo zvinouya sezvo Japan ichirwira kuwanda mune COVID-19 kesi dzakasundira dzinenge hafu yematunhu enyika kuita mamiriro ekukurumidzira.
Kubvira pakatanga denda, Japan yakanyora 1.38 mamirioni akasimbiswa ezve COVID-19 uye 15,797 kufa kwevanhu kubva kuhutachiona. Parizvino, vakuru veJapan vakapa 118,310,106 doses yemushonga weCCVID-19.
Lufthansa inochengetedza kumwe kunaya pamari ...
Akanakisa Polaris Ranger Accessories